Global Voices teny Malagasy » Pakistan: Nisy baomba nipoaka sady nahafaty tany Peshawar · Global Voices teny Malagasy » Print
Pakistan: Nisy baomba nipoaka sady nahafaty tany Peshawar
Voadika ny 06 Desambra 2008 8:49 GMT 1	 · Mpanoratra Muhammad Farhan Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Pakistana, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Vaovao Mafana, Voina
Peshawar , renivohitry ny faritany avaratra andrefan'ny sisintany any Pakistan no tratran'ny  fipoahana baomba mahery vaika androany [zoma]. Nitoby teo akaikin'ny trano fivoriana ilay fiara izay miaty fitaovana mora mipoaka 30-40 KG. Tsy fanafihana famonoantena ity satria tsy nisy olona tao anatin'ny fiara. Araka ny tatitra farany nataon'ny Polisy dia voamarina fa 21 no isan'ny maty ary mihoatra ny 90 no naratra.
Nanoratra i  Ayesha fa “Nandriaka ny ra tao Peshawar”:
Fipoahana baomba sy fahafatesana firy no mbola ho hita amin'ity tanàna ity?Faritra vory vahoaka sy teritery i Koocha Risaldar, Kissa Khawni. Nitranga nandritra ny fotoana ivoahan'ny olona olona miantsena ny fipoahana satria efa mitatao rahateo ny Eid. Na dia nanakaiky ny Imam Bargah aza ny fipoahana, araka ny fijeriko dia tsy izy no nokendrena.
Niharatsy ny toe-draharaha rehefa tapaka ny herinaratra tamin'iny faritra iny ary nisy afo nidedadeda noho ny fipoahana teo akaikin'ny fantsona mitondra entona fandrehitra. Tonga dia tratran'ny afo avokoa ny trano fitehirizan'entana sy ny fivarotana manodidina. Ny loharanom-baovao moa dia miahiahy fa valy bontana avy amin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany Mumbai (Bombay) ity fametrahana baomba ity ary dia lasa indray ny tsatotsatoka mahazatra ny fampahalalam-baovao ary milaza ny haino aman-jery vaovao fa metyho ny sampam-pitsikilovana indiana RAW noao ambadik'ity raharaha ity. Ny minisitry ny NWFP (inona koa izao izany? sampam-itsikilovana Pakistaney?) koa manamarika fa mety ho vahiny no namolavola izao fanafihana izao.
Lahatsary  manaja ampiasain'ny mpampiasa YouTube Kabirrind 
Nalaindaina ihany ny mpamaham-bolongana Pakistaney hiresaka ny momba ity vaovao ity noho ny mahafaran'ny herinandro, ny Hajj (fivahiniana masina) ary ny fetinn'ny Eid ul Adha. Fa nisy kosa ny nazoto nampita ny vaovao tamin'ny alalan'ny Twitter. Ho amin'ny vaovao farany momba ity voina ity dia azonao arahina ao amin'ny Twitter eto  izany na amin'ny Twitter-ko manokana eto . Azonao jerena ihany koa ny fantim-baovaon'ny haino aman-jery ato amin'ny bolongako Guppu.com .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/06/1412/
 no tratran'ny: http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE4B43U420081205?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=22&sp=true
 Nanoratra i: http://ayesha5.wordpress.com/2008/12/05/peshawar-bleeds/